🥇 ▷ Apple wuxuu u oggolaanayaa Spotify in lagu xakameeyo Siri ✅
Apple wuxuu u oggolaanayaa Spotify in lagu xakameeyo Siri
Sida uu u sheegi karo Macluumaadka, Apple waxay wadahadalo la leedahay Spotify si loogu oggolaado adeegsadeyaasheeda inay helaan mid ka mid ah astaamaha ugu-sareeya ee sannadihii dhowaa: xoogga xakamee adeegga muusikada qulqulka iyada oo loo marayo Siri. Waa suurta gal in la adeegsado “Hey Siri”, oo ay ku xigto tilmaamaha la doonayo, in lagu ciyaaro heeso ama dukumintiyo muuqaal ah, iyo sidoo kale helitaanka liisaska ama albums.
Cusboonaysiinta Siri (Application Programming Interface) API ee macruufka 13 ayaa horeyba uga mid ah aaladaha qaar loogu talagalay soo-saareyaasha inay ku biiriyaan saaxirku barnaamijyadooda maqalka – cod-baahiyaha, buugaagta maqalka, raadiyaha iyo muusikada. Dabcan, Spotify wuxuu ka faa’iideysan karaa isbedelada SiriKit Haddii wadahadaladu midho dhalaan.
Haddii heshiiska ugu dambeyntii la soo gabagabeeyo, maahan markii ugu horreysay oo Apple ay u oggolaato adeegyada la tartamaya inay xakameyso Siri. Tusaalaha ugu wanaagsan waa WhatsApp, tartameyaasha ugu waaweyn ee barnaamijka Fariimaha. Waqtigaan, kaaliyaha horayba wuxuu uga shaqeeyaa qaar ka mid ah qalabka gaadiid, lacag bixinta, nashaadaadka jirka, iyo kuwo kale.
Macluumaadku wuxuu soo baxayaa markay labada shirkadoodba noqdaan Waxay isku hayaan khilaaf loogu talagalay dhaqannada hal-abuurka leh ee Cupertino ee ku jira App Store. Spotify wuxuu ku doodayaa in guddiga 30% uusan ogoleynin inuu ka hor tago Apple Music, sababtoo ah kan dambe ma bixiyo wax khidmad ah. Apple, dhinaca kale, waxay tusisay Midowga Yurub kahor in xogta ay soo bandhigtay adeeggu ay “marin habaabin”.
Xitaa Spotify waxay soo saartay degel internet ah oo ay ku muujiso ra’yigeeda ku saabsan “canshuurta Apple” Mid ka mid ah farriimaha la muujiyey: “Apple ma noo oggolaan doonno inaan ku jirno HomePod waxayna xaqiiq ahaan noo oggolaan doonaan inaanan xiriir la yeelanno Siri.” Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in xaaladdu way ku dhowdahay bixinta a lama filaan ah oo dhinac ah dhinacyada ay khusayso.